Knowledge Archives - FOREVER WEB STUDIO
How to Configure Zoho Mail on Microsoft Outlook Express
by admin | Aug 14, 2018 | Knowledge
How to Configure Zoho Mail on Microsoft Outlook Express Video ကတော့ Zoho Email Service ကိုအသုံးပြုသူများ အတွက် ကိုယ့်ရဲ့ ရရှိတဲ့ Mail Storage Size ပြည့်သွားလို့ ဖြစ်ဖြစ်၊ Internet Access မရှိဘဲ ကိုယ့်ရဲ့ Email တွေကို ပြန်ကြည့်ချင်လို့ဖြစ်ဖြစ် ပြုလုပ်လို့ ရတဲ့...
How to Use Web Mail Service
by admin | Jan 31, 2018 | Knowledge
Using Web Mail Service ကျွန်တော် ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ Web Mail Service ကို အသုံးပြုပုံ၊ Mail Setting များအကြောင်းနဲ့ Web Mail ကို ဘယ်လို Configuration ပြုလုပ်ရမလဲဆိုတာတွေကို ပြသပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ များသော အားဖြင့်တော့ အခမဲ့ ရရှိတဲ့ Gmail ကို အသုံးပြုကြပေမယ့် ကိုယ့်ရဲ့...
Email Configuration on Microsoft Outlook Express
by admin | Jan 28, 2018 | Knowledge
Email Configuration on Microsoft Outlook Express Email တွေကို Microsoft Outlook Express မှာ ဘယ်လို Configuration ပြုလုပ်ရမလဲဆိုတာကို မြန်မာလို ရှင်းလင်းပြသထားတဲ့ Video File...
အီးမေလ်လုံခြုံရေး Email Security (1)
by Phyo Wai Zaw | Mar 11, 2017 | Knowledge
ကျွန်တော်တို့ မကြာခဏ ကြားနေရတဲ့ Gmail ပေါက်တာတို့ ၊ Email ကနေ ပိုက်ဆံ လိမ်တောင်းတာတို့၊ Email နဲ့ပို့လိုက်တဲ့ ငွေလွဲရမယ့် Bank Account တွေက မှားပြီးလွှဲလိုက်တာတို့တွေကို အတတ်နိုင်ဆုံး ကာကွယ်နိုင်ဖို့အတွက် မျှဝေပေးလိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ။ Email လုံခြုံအောင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ...
HAPPY NEW YEAR SPECIAL PROMOTION
Copyright © Forever Web Studio. 2012-2018 All Right Reserved.